Isticmaalka GIS si loo xakameeyo loogana hortago Dengue - Geofumadas
Ogast, 2014 Geospatial - GIS, SuperGIS
Maaddada Mesoamerican iyo tropic caalamka guud ahaan, Dengue waa cudur caadi ah xilliga roobka. Ogaanshaha meesha tirada ugu badan ee dhacdooyinka ay dhacayaan waa hubaal ah jimicsiga codsiyada GIS ay bixiyaan natiijooyin qiimo leh.
Waxaan xasuustaa markii aan ahaa ilmo, dengue ma ahayn qof sida hadda; kaliya todobaad oo nasasho leh qandho, murqo xanuun, dheecaano badan iyo qoomameynaya inaysan awoodin in ay ciyaaraan ciyaar wanaagsan oo kubada cagta ah oo ay la socdaan saaxiibada xaafada. Maanta waa dhimasho, haddii qof uusan u tagin dhakhtarku wuxuu ku dhiman karaa laba maalmood gudaheeda oo ah dhacdo naxdin leh.
Laakiin dhibaatada dimoqraadiyada ee magaalooyinka Mesooerica ma fududa in la xaliyo. Cayayaanka qallalan (Aedes aegypti) ayaa ku nool biyo nadiif ah, sidaas darteed waxay noqon kartaa taakulo badan oo banaan ama dheriga geedka. Ugu dambeyntii, habka loola dagaallamo waa burburinta hatcheries oo ay weheliso fumigga. Iyadoo aan lahayn macluumaad qaas ah, shaqadani waxay noqon kartaa mid aan dhammeystirneyn oo aan dhameystirneyn.
Jimicsi xiiso leh oo ku saabsan codsiga Nidaamka Macluumaadka Juquraafiyeed si loo baaro dhinacyada caafimaadka waa kiiska Taiwan. Hadafku waa in la falanqeeyo sida kaneecada loo kala wareejiyo meelaha udhexeeya iyo, si sidan ah, si loo ogaado koritaanka ugu weyn ee u dhaxeeya wakhti kasta. Sidaa daraadeed, cabbirada qoondejinta iyo miisaaniyada waxaa loo tixgeliyaa isku mar.
Marka la sameeyo shabakadda xayawaanka, cilmi-baarayaashu waxay tilmaami karaan degaannada kaneecada faafa oo waxay xisaabinayaan waddooyinka suurtogalka ah ee dhaqdhaqaaqooda waxayna ka hortagaan inay u soo maraan wadiiqooyinkaas.
Sida laga soo xigtay natiijooyinka cilmi-baaristan, taas oo wiiqaysa xoojinta xiriirka shabakadaha xayawaanka by xakameynta hareeraha gudbinta ee kaneecada cudurka qaba, faafitaanka xummadda dengue waxaa si fiican loo xakameyn karaa. Saddexda ujeeddadoodu waa:
Isticmaalidda falanqaynta shabakada xeeldheer si loo ogaado hareeraha is-goysyada muhiimka ah ee isdaba-joogga ah ee dhaqdhaqaaqa kaneecada faafa inta lagu jiro iyo inta u dhexeysa mudada kasta
Samee talada la xidhiidha isgoysyada kala duwan ee isdifaaca si loo joojiyo faafidda kaneecada cudurka qaba.
La aqbalo barnaamijka GIS si loo isugu keeno xogta falanqaynta iyo natiijooyinka iyo si loo muujiyo macluumaadka khariidada.
Natiijo ahaan, arrimaha soo socda ayaa la heli karaa:
Xumad waqtiga-waqtiga ah ee xummadda dengue.
Marka ay timaado in faafinta meel-waqtiga cudurka dengue ah, dhaqdhaqaaqa aadanaha iyo dhaqdhaqaaqa kaneecada cudurka waa waajib. Xusuustaa kala duwan oo duulimaad ka mid ah kaneecada ah waa in aan ka badnayn 100 mitir, taas oo Axdigu cudurka waa wakhti; Sidaa darteed faafitaanka tartiib tartiib ah. Haddii waddada la ogaan karo, waxaa suurtagal ah in la xaddido iyada oo la adeegsanayo xoogagga dibadda. Sidaa darteed, wadiiqooyinka gudbinta muhiimka ah cudurka lagu ogaan karaa oo soo bandhigay la kaneecada software GIS, iyo meelaha ay kaalinta labaad waxaa lagu talinayaa in laga saaro ayaa sidoo kale lagu muujiyay in madal GIS si loo xakameeyo faafidda cudurkan safmarka ah of dengue
Xogta la xiriirta Xarumaha Xakameynta Cudurrada ee Taiwan ayaa la qabtay, la falanqeeyay oo lagu soo bandhigay mashruuc GIS ah si loo baadho goobaha isgaarsiinta ee ugu weyn ee kaneecada cudurka qaba. Ka dib, waxaa la soo jeediyay in talada laga saarayo in la tirtiro goobaha muhiimka ah si loo khatiyo xiriirka ka dhexeeya xoojinta degaan kasta iyo in la gaaro ujeedada ka hortagga faafidda.
Shabakadda Waqti-Goob-Deg-deg ah ee deegaannada iyo Dhaqdhaqaaqa kaneecada cudurka qaba.
Shabakadda waqtiga-buuxinta waxay inta badan ka kooban tahay lakabyada noodhka iyo khadadka, kuwaas oo ka tirsan waqtiyo kala duwan. Moodhey kastaa waxay tilmaamaysaa habka loo yaqaan "kaneecada" kiniiniga laga helo, waxaa lagu abuuraa bartamaha mawduuca ku yaal lakabka. Khad kasta oo isku xira laba noodood wuxuu u taagan yahay waddada labada deegaan ee kala duwan ee dhaqdhaqaaqa kaneecada. Waxaa intaa dheer, khadadka waxaa loo qaybin karaa laba nooc oo isku xira laba noodood oo isku mid ah lakabka isku midka ah ama lakabyo waqti kala duwan ah. Xuddunta joogtada ahi waxay ka dhigan tahay wadada isgaarsiinta suurtagalka ah ee isla mudadaas, ilaa iyo inta ay labada dhinacba ku jiraan isla muddadaas. Dhanka kale, xariiqa dhibcaha ah waxay u taagan tahay wadada gudbinta suurtagalka ah iyada oo loo marayo laba jeer, iyada oo la bixinayo in labada dhibcood ee ugu dambeysa ay ku jiraan wakhti kala duwan. Shabakadda xayawaanka ee kaneecada loo yaqaan 'dengue' ayaa la dhisay iyadoo la raacayo mabdaarkii hore.
Xisaabinta muhiimadda xiriirka kasta
Falanqeynta waxaa loo isticmaalaa shabakada deegaanka iyo qeexidda falanqaynta waqtiga-waqti si loo qeexo macnaha xidhiidh kasta. Waxaa intaa dheer, aqoonsiga ururada deriska ee deriska ah ayaa u oggolaanaya in ay qeexaan xidhiidhka isbeddelka ee vektorka.
Noocyada iyo sifooyinka isku xirnaanta
Marka loo eego sifooyinka ku meel gaarka ah ee xiriirada isku midka ah ama waqtiyo kala duwan, iyo natiijooyinka falanqaynta oo ay ku jiraan isku xirka caalamiga ah iyo isku xirka xaafadda. Xidhiidhka waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu muhiimsan ee dhan. Qayb ka mid ah walxaha la yiraahdo waxay la mid tahay habka ugu muhiimsan iyo furaha muhiimka ah ee gudbinta dhaqdhaqaaqa kaneecada cudurka qaba. Intaa waxaa dheer, isku-xirka isku midka ah ama waqtiyada kala duwan waxay muujinayaan isdhexgalka khatarta ah ee halista ah. Dusha sare ee noocyada xiriirinta kala duwan ee GIS Software, ayaa u oggolaanaya in la arko isugeynta ugu weyn ee isdhexgalka ee lagu dhisay labada isku mid ah iyo waqtiyo kala duwan.
Xaaladdan oo kale, layligan ayaa la isticmaalay SuperGIS Desktop
Tani ma aha mid cusub. Waxaan xusuustaa Dr. Snow's khariidadaha loo yaqaan 'dengue'. Xaaladdan, helitaanka aan u leenahay tiknoolajiyada way ka duwan tahay halkii laga noqon lahaa qashin qubka wakhtigaas, waa mid
Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad ka arki kartaa bogga Supergeo Technologies.
Post Previous«Previous UPSOCL - Waa meel lagu dhiirri geliyo
Post Next Furitaanka, calaamadeynta iyo theming file ka mid .shp la Microstation V8iNext »